သခင်ဇင် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဗကပ ဉက္ကဌ သခင်ဇင်
သခင်ဇင် ကို ၁၉၁၂ ခုနှစ်တွင် ဒိုက်ဦး မြို့ ၌ ဦးကျော်ဇော+ဒေါ်အေးညို တို့မှ မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။
၁၉၄၂-၄၃ ညောင်လေးပင်မြို့နယ် တို့ဗမာဆင်းရဲသား အစည်းအရုံး အလုပ်အမှုဆောင် နှင့် ဗကပ ပါတီဝင် ဖြစ်ခဲ့သည်။
၁၉၄၅ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး ၌ ညောင်လေးပင် မြို့နယ် နှင့် ရွှေကျင် မြို့နယ် တို့တွင် နိုင်ငံရေးမှူး အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သည်။ ထိုနှစ် ဇူလိုင်လ တွင် ကျင်းပသော ဒုတိယအကြိမ် ပါတီညီလာခံတွင် ဗဟိုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် ရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။
၁၉၄၇ ဗမာနိုင်ငံ တောင်သူလယ်သမား သမဂ္ဂ (ဗဟိုဌာနချုပ်) တွင် ဒုတိယ ဉက္ကဌ အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့လေသည်။
၁၉၄၈ မတ် ၂၈ တွင် ဗကပ တောခိုသော အခါ၌ ဗကပ ဗဟိုခေါင်းဆောင်များ နှင့်အတူ ပဲခူးရိုးမ သို့ တောခိုခဲ့လေသည်။
၁၉၄၉ စက်တင်ဘာ တွင် ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေး ၌ ပေါ်လစ်ဗြူရို အဖွဲ့ဝင် (နိုင်ငံရေး ဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်) အဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။
သခင်ဇင် သည်၁၉၄၈ ဗကပ တောခိုပြီးနောက် ဗဟိုကော်မတီ အဆင့်အတန်းအရ အမှတ်စဉ်တွင် အဆင့်နေရာ (၆) ဖြစ်သည်။A
၁၉၅၀ သခင်ဇင်သည် ပျဉ်းမနား မြို့နယ်၌ ရှိသော ဗကပ ဗဟိုဌာနချုပ် သို့ အောက်ဗမာပြည် ဌာနခွဲ မှ ပြောင်းရွေ့ တာဝန်ယူခဲ့သည်။ ထိုစဉ်အတွင်း တောတွင်း ပြည်သူဒီမိုကရေစီ တပ်ပေါင်းစု ဗဟိုစည်းရုံးရေး ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ခဲ့သည်။
၁၉၅၂ ခုနှစ်ဦးတွင် သခင်ဇင်သည် ဗကပ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်တိုင်း သို့ စုံစမ်းရေးအဖွဲ့၏ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် သွားရောက်ခဲ့ရသည်။
၁၉၅၂ ဇူလိုင် ၄ ရက်မှ စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်အထိ ကျင်းပခဲ့သော ယောနယ်၊ ပုံတောင်ပုံညာ ဒေသ သုံးပါတီ ညီညွတ်ရေး ကွန်ဖရင့် တွင် ဗကပ ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်လည်း တက်ရောက်ခဲ့သည်။
၁၉၅၃ မတ် သခင်ဇင်သည် တောင်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တွင် နိုင်ငံရေးမှူးကြီး အဖြစ်ဖြင့်လည်း ယာယီတာဝန်ယူခဲ့သည်။
၁၉၅၅ ခုနှစ် ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေး အပြီးတွင် ပဲခူးရိုးမ သို့ ဌာနချုပ် တာဝန်ဖြင့် သွားရောက်ခဲ့ရသည်။ ပြည်တွင်းစစ် ရပ်စဲရေ:၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ် ကို အောက်ခြေပါတီဝင်ထု အား တင်ပြရန် နှင့် မဟာမိတ် ပါတီများအား ရှင်းလင်း တင်ပြရန် အတွက် တာဝန်ယူခဲ့သည်။
သခင်ဇင်သည် ညောင်လေးပင် မြို့ တွင် နေထိုင်သော ဦးဘဦး၊ဒေါ်လွယ် တို့၏ သမီး ဒေါ်ကြည်ကြည် နှင့်လက်ထပ်ခဲ့သည်။
A. ^ ထိုစဉ်က ဗကပ ဗဟိုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များမှာ မိမိ တို့ မူလ နာမည်များကို လျှို့ဝှက်ရေး အရ ပြောင်းလဲမှည့်ခေါ်ခဲ့ကြပါသည်။ ယင်းကို တော်လှန်ရေး အမည်ဟု ဆိုကြပါသည်။
(၁)ရဲဘော် သာဒင် (သခင်သန်းထွန်း)
(၂)ရဲဘော် ခင်မောင် (သခင်ဗသိန်းတင်)
(၃)ရဲဘော် လှဖေ (သခင်တင်ထွန်း)
(၄)ရဲဘော် အေး (ရဲဘော်လှသောင်း)
(၅)ရဲဘော် သက်ဖေ (သခင်သန်းမြိုင်)
(၆)ရဲဘော် လေးမောင် (သခင်ဇင်)
ရဲဘော်မြ၊ ရဲဘော်ဘခက်၊ ရဲဘော်တင်ရှိန်၊ ရဲဘော်စန်းမြင့်၊ ရဲဘော်အောင်သူ (၁၉၇၆). ဇင်+ချစ် နောက်ဆုံး (၂). ဦးဘခက်၊ ဘိဝှာ ပုံနိုပ်တိုက်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=သခင်ဇင်&oldid=230118" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ မတ် ၂၀၁၅၊ ၀၈:၁၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။